Forum serasera malagasy Manana ny rariny ve ny SECES amin' ny fitakiany? - Dinika forum.serasera.org
Manana ny rariny ve ny SECES amin' ny fitakiany?
Fitohizan'ny hafatra : Manana ny rariny ve ny SECES amin' ny fitakiany?
2689 - 02/02/2004 21:47
Miara-manaiky ny ankabeazan' ny olona fa ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena sy ny fikarohana ara-tsiantifika ankehitriny dia olon' ny serasera ary azo ifandinihana tsara. Ny SECES kosa raha mitaky ny hanasarahana ny ministeran' ny fanabeazana dia tsy hoe tsy fitiavana an'Ingahy ministra fa ahiahy amin' ireo firenen-dehibe sy mpiara-miombon' antoka an' i Madagasikara izay manery ankolaka ny fitondrana ankehitriny hanimba ny ho avin' ny fampianarana Malagasy. Na eo aza mantsy ny hoe fiaraha-miombon' antoka, ny tena marina dia samy mitady ny tombony ho azy, ary fitsetsafana aza no ataon' ny vahiny (FMI, BM) fa tsy fanampiana loatra. Tsy tarigetran' ny vahiny ho antsika mihitsy izany hoe hanana manam-pahaizana afaka hifaninana aminy izany i Dago. Ny kinendriny dia ho olona hotarihina no eto fa tsy ho mpitarika na mpibaiko velively, ary rehefa tsy mahavita azy ny fampianarana Malagasy ka hianatra any ivelany ny zaza malagasy dia hogiazany any ihany koa fa tsy ho tafody eto hampandroso firenena mihitsy.
Ny hoe Education pour tous ampiany sy dokafany io dia hoe ampianaro hatramin' ny 3è ny zaza malagasy hahazo ny baikonay @ teny vahiny mba hahamora ny fibaikoana azy.
Raha tena te-hampandroso maharitra ny firenena marina ny mpitondra dia ny fanamafisana ny fampianarana olona ho mpikaroka (Ingénieurs, Médecins, ...) no tokony ho vaindohan-draharahany ary tokony heverina ny amin' ny relève dieny izao.
Amin'izao ministera mitambatra izao tokoa mantsy dia rehefa mahavita asa lehibe eo amin' ny sehatry ny fanabeazana fototra ny minisitera dia ahiana ho hadinon' ny vahoaka ny fahafatesan' ny fampianarana ambony tsikelikely.
Inona anefa no vahaolana sy paikady satria tsy TIM na Ravalomanana loatra no fahavalon' ny fampianarana eto fa ireo vahiny? Manana hery sy fomba hanehoana izany ve isika? Miala tsiny aho raha tsy afaka Hino fotsiny ihany...
fijo - 03/02/2004 11:10
marina io tsikera atao io,ary izaho koa dia tsy mino fotsiny izany.ary amiko,dia isika malagasy ihany,no hafaka ahalala ny tena tsara ho an tsika,fa tsy ny vahiny rehetra te higalabona aty.
kally - 03/02/2004 20:33
Ka raha mbola mangata-bola sy fanampiana lava amin'ny vahiny dia tsy maintsy mihaino izay lazain'ny vahiny e!
sipagasy - 03/02/2004 17:29
ka izay no ilaina ny fahaleovan-tena ry Kally annn tsy hiankina intsony fa hahavita tena tanteraka na ara-tsakafo izany na ara-toe-karena ary ara-pahalalana é!
fijo - 04/02/2004 21:44
kally a,ny tany afrikanina sasany na mangata bola aza dia mijoro amin'ny politikany,ary voahaja tsara.oh,senegal
2689 - 04/02/2004 21:57
Raha azoko ny tenin' i fijo dia manana hadisoana izany ny mpitondra manaraka ambokony ny sitrapon' ireo vahiny. Tsy dia fantatro aloha ny toetry ny fampianarana any Senegal fa raha ny fandinihako ny manodidina antsika eto aloha dia i Madagasikara irery no tany afrikana akaiky eto misy fampianarana ambony mamoaka manam-pahaizana mpikaroka sy afaka handray toerana dirigeant. Isika Malagasy koa intelligent be.
Maro ange ny tany afrikana no heverina hoe mandroso kanefa ny mpitantana ny orinasa lehibe any tsy misy afrikana na iray aza fa vahiny avokoa e! Izay ilay fanandevozana vaovao (néo-colonialisme). Efa manjaka eto Madagasikara io fa raha maty aza ny fampianarana ambony mainka ho loza fa ho vazaha hatramin' ny chef de service...
fijo - 05/02/2004 21:50
2689 isika gasy dia manampahaizana,marina io,fa isika koa dia malemy saina.tsy sahy mijoro.ohatra akainy.vitsy ny gasy miasa amin'ireny ong internationaly ireny.antony,tsy sahy miseho isika.na ny vazaha aza dia mahatsapa an'izay.ny gasy vao miteny ny vazaha hoe izao no tsara aminareo,dia oui patro.izy mandalo ery no mahita ny tsara hoa antsika?mampieritreritra be.taty aho indray mandeha dia efa niady hevitra tamina vazaha satria misy ilay milaza hoe"specialiste de l'afrique et de madagascar".dia hoy aho,na izahay malagasy aza tsy mahay tsara ny momba anay,ka ianareo tsy mipetraka any indray no miseo mahalala.satria hoe mandinina boky.vokany,torohevitry ny FMI,aiza isika?
kroodlood - 06/02/2004 17:24
Marina tsy zao iadiana hevitra kosa aloha ilay hoe ny fampianarana ambony no isan'ny hitoeran'ny hovintsika malagasy eh ! Nefa efa tena sempotra ange io sehatra izao eh !!!! Inona ny mba hevitrareo @ izany ? Satria raha izany ary de efa tafalatsaka anaty lavaka isika ka ho sarotsarotra ihany vao ho tafavoaka .Betsaka ny manam-pahaizantsika no any ivelany tsy te hiherika hody intsony satria tsy misy "environnement " tsara ho azy aty Mada , ao koa ny sasany izay mba hoe nianatra tany ivelany nefa saina efa voapasoka tsy afa-mijery afa-tsy izay tian'ny vahiny hampijerena azy no entina miditra aty Mada !!!!!!!!!!!!! Sarotra hoy aho ....
nozzle - 17/05/2004 18:43
Ny tena marina d ireo milaza azy ho mpikaroka sy mpampianatra ireo no hirakin'i vahiny hanapotika satria ireo anie mbola taranaka mpamadika daholo matoa lasa ambony toy izao e! ary ilay manana diplaoma ireo fa tsy manam-pahaizana,fa ny manam-pahaizana dia ireo miasa @ volabe any ampita any.Ny tsy fampianarana v d mitory fitiavantanindrazana,jereo tsara rehefa vita io d ireo ihany no maniraka mpianatra ankolaka hitaky zavatra hafa koa d eo ihany ny tokona.mba lazao anay hoe mba inona no vokatrizany fikaroandreo mpampianatra mpikaroka izny?htrmzao tsy hitako .asa?
booboo - 24/05/2004 14:17
masiaka be kosa nozzle zany e